Man United oo guul ay u qalantay ka soo gaartay Brighton, xilli Bruno Fernandes kulankan uu wacdaro ka dhigay… +SAWIRRO – Gool FM
Kooxaha Real Madrid, Everton & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono qaar ka mid ah SHANTA horyaal ee ugu waa weyn Yurub
Liverpool oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sheffield United oo ay booqatay… +SAWIRRO
Kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo barbardhac ku kala baxay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Sheffield United iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Arsenal oo guul ay u qalantay kaga soo gaartay Leicester City garoonka King Power… +SAWIRRO
Man United oo guul ay u qalantay ka soo gaartay Brighton, xilli Bruno Fernandes kulankan uu wacdaro ka dhigay… +SAWIRRO
Dajiye June 30, 2020
(England) 01 Luulyo 2020. Manchester United ayaa guul ay u qalantay ka soo heshay kooxda Brighton oo ay ku booqatay garoonkeeda The American Express Community, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League ee dalka England.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-2 ay ku hogaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester United.
Daqiiqadii 16-aad Manchester United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Mason Greenwood, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Aaron Wan-Bissaka.
29 daqiiqo markii ay ciyaarta aheyd Bruno Fernandes ayaa dheesha ka dhigay 0-2 ay ku hogaamineysay kooxda Manchester United, iyadoo uu caawinta goolkan lahaa Paul Pogba.
Daqiiqadii 50-aad Manchester United ayaa sii dheereysatay hogaaminta dheesha, iyadoo Bruno Fernandes uu dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta, wuxuuna dheesha ka dhigay 0-3, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay Mason Greenwood.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 0-3 ay kaga soo adkaatay Manchester United kooxda Brighton & Hove Albion oo ay marti ugu aheyd garoonka The American Express Community.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay
Kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Camp Nou… +SAWIRRO